ဝက်ခြေထောက်စတူး/Pork Leg Stew | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← စားတော်ပဲပြုတ်/Boiled Green peas or Garden peas
ပင်လယ်စာပဲကြာဇံသုတ်/Seafood Glass Noodle Salad →
မိန်းမတွေက တသက်လုံးသူတို့မစားသမျှ ယောက်ျားရမှသူစားချင်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကျွေးချင်ကြပါတယ်။ အိသက်အဒေါ်တယောက်ဆိုအပျိုတုံးက လုံးဝ ငါးမစားပဲ သူယောက်ျားရတော့မှ သူ့အိမ်မှာနေ့တိုင်းရေသတ္တဝါဟင်းတမျိုးပါ ပါတယ်။ တကယ်အဖြစ်အပျက်၊ အိသက်လဲ အဲလိုပဲ အမဲသားဆိုသူကြိုက်လို့လိုက်စား၊ ခုဒီဝက်ခြေထောက်စတူးလဲ သူစားလို့လိုက်စားပေါ့။ အမေ့ကို ချက်နည်းမေးတုန်းကတောင် သမီးစားလို့လားလို့မေးခံရသေးတယ်။ ထားပါတော့လေ ပြောချင်တာကအိမ်က ယောက်ျား အကြိုက်ပါလို့။
When women got married, they really like to cook for their husband’s favorite against their lifelong dislike. One of my aunts did not like any fish dishes at all when she was single but now in her daily arrangements for food includes one of the seafood dishes as per her husband’s front runner. Yeah, that was true story now I am eating beef because of my husband and also this Pork hook stew. I got asked when asked to my mum about the recipe that, “do you really eat these?”. Let it be, all I meant was this stew is my husband’s favorite.
-ဝက်ခြေထောက် ၅၀၀ ဂရမ်(ခွါမပါ)
-ပဲငံပြာရည်အကြည် ၁ဇွန်း( စားပွဲတင်)
– five spice powder တဇွန်း(စတပ)
-သကြား ၃ဇွန်း (စတပ)
-ကြက်သွန်နီတဝက်ပါးပါးလှီး ( သေးရင်တလုံး) ၊ ဖြူ ၃မွှာထောင်းပြီး
-ဂျင်း ၂ ဇွန်း(စတပ)
အိသက်က Pressure cooker နဲ့ချက်မှာမို့ ရေစင်စင်ဆေးပြီးသား ဝက်ခြေထောက်များကို အိုးထဲထဲ့ပြီးပဲငံပြာရည်အနောက် ၁ဇွန်း၊ ပဲငံပြာရည်အကြည် ၁ဇွန်း၊ ဟင်းချက်ဝိုင် ၂ဇွန်း၊ five spice powder တဇွန်း၊ သကြား ၃ဇွန်း တို့နဲ့ ဆုပ်နယ်ထားပါ။ မိနစ်၃၀လောက် ထားလိုက်ပါ။
500g of pork leg (not hook, hook included)
1 tbl spoon of dark soy sauce
1 tbl spoon of light soy sauce
2 tbl spoons of cooking wine
1tbl spoon of five spice powder
3tbl spoons of sugar
sliced onion (half),3pounded garlic segments
2tbl spoons of ginger
As I will be cooking inapressure cooker, put the thoroughly washed pork leg into the cooker, then mix them with light and dark soy sauce, cooking wine, five spice powder and sugar. Let it marinate for about 30 minutes.
ပြီးရင် ဆီနဲနဲ နဲ့အိုးကိုအပူစပေးပြီးဝက်ခြေထောက်ကိုလုံးပါ။ ပုံပါအတိုင်း သကြားများအရည်ပျော်ပြီးဖျစ်ဖျစ်မြည်လာပါမယ်။ အနံ့လဲအလွန်မွှေးလာပါတယ်။
After heating the cooker withabit of oil, add the marinated pork leg and stir it thoroughly. As shown in picture, the sugar will melt and cause the sizzling sound. And you will getainviting smell as well.
အဲဒီအချိန်မှ ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ ၊ဂျင်း ထဲ့ ပြီး ၁မိနစ်ခန့်လုံးကာ ရေ၁လီတာခွဲခန့်ထဲ့ပြီး မီးအနေတော်ထားကာ၁နာရီခန့်ပေါင်းလိုက်ပါ။ အောက်မကပ်စေရန်အိုးကို လှုပ်ပေးပါ။ အသားလေးများ နူးအိနေပြီဆိုရင် ငရုတ်ကောင်းလေးခပ်ပြီးစားလို့ရပါပြီ။
Let the cooker cooks it for an hour after addingaminute mixing of 1 and half litre of water, onion, ginger and garlic. Move backward and forward the pot in order to have balance heat. Once the meat is delicate, sprinkle the pepper to be served.
(မှိုခြောက် ကြိုက်တတ်ရင်ရေစိမ်ထားပြီးအနေတော် လှီးကာ အသားနူးခါနီး ထဲ့ကာ စားနိုင်ပါတယ်)
(Chinese Dry Mushroom can be added if you like just before the meat is soft and delicate.)
By eithet • Posted in တရုတ်အစားအစာ, မြန်မာဟင်းလျာများ
6 comments on “ဝက်ခြေထောက်စတူး/Pork Leg Stew”
21/03/2012 @ 7:05 am
Ma ! i am also B.E.H.S (2) Latha.2000 Batch.Five spice powder means Green chilli powder. can u show me these one on coming post? i really wanna to know?
21/03/2012 @ 9:02 am
ok nyi ma lay..
21/03/2012 @ 7:15 am
Ma ! my gmail account is leomyatleo@gmail.com.
21/03/2012 @ 9:10 am
nyi ma lay . i posted the photo of5spice powder pic in pork stew post.
22/03/2012 @ 1:32 am
Thanks Ma! I will buy and try to cook this curry .
22/03/2012 @ 8:32 pm
welcome Nyi ma lay. Let me know if it is ok or not naw.